Magnetic resonance imaging bocwepheshe Job Description / Duty Sample Futhi Imisebenzi – JobDescriptionSample
Home / Magnetic resonance imaging bocwepheshe Job Description / Duty Sample Futhi Imisebenzi
Usebenza Resonance Imaging (MRI) izithombe. Gada ukuphepha isiguli nenduduzo . Kungenzeka unikele gadolinium Ngokuphambene Isikali ngemithambo yegazi. On ukubuyekeza ume izindlela MRI kukhona, alichaza kungase interview ngamunye, futhi nesineke indawo. Kwangathi faka idatha kwikhompyutha ezifana nesineke ifa, ukuqondanisa esibekiwe, esifundeni yemvelo baba ukuskenwa, nendawo ukuvuma.
Jobe Amakhono Imfuneko
Bethela kokulandela bokuphila kuholela suffereris isandla, esifubeni, ukhalo, noma ezinye izingxenye zomzimba.
Lungisa uzibuthe resonance imaging (MRI) iyunithi noma i-hardware neuropathy.
Ukuziphatha Ukuhlolwa ingxoxo zabantu ukuhlonza Izimo, isibonelo ayoni izinto valve kukhona elawula ukushaya kwenhliziyo wokufakelwa .
Khiqiza amakhophi agade ingozi alo izithombe zithuthele ihluzo kusuka kukhompyutha ukuze workstation noma kwisitoreji semidiya.
Yakha noma wenze idatha isithombe-magnetic resonance izithombe.
Chaza uzibuthe resonance imaging (MRI) izindlela abantu, abasabalalisi ukuthi kukhona umuntu, amalungu noma yasendlini.
Faka ngemithambo yegazi bheka umahluko imibala, ezifana ngokwesibonelo gadolinium Ngokuphambene, nesilungiselelo practice ngokuhambisana.
Hlola izithombe mayelana kakhulu, sisebenzisa ikhamera kanye namadivayisi kazibuthe Ukuvikelwa resonance.
Yenza magnetic resonance imaging (MRI) scanner.
Uma wayefisa, ukuqinisekisa ezifanele indawo immobilization amayunithi kokuba, ungenye indawo abanale nkinga zigodliwe.
Supply earplugs noma ama-earphone ukuze abantu zokuthuthukisa kalula nemisindo aphansi ukuthi Kubuhlungu.
Khetha imibuthano noma amasu afanele imaging ukwenza izithombe ayadingeka.
Xazulula ukukhathazeka eziyinkimbinkimbi exhumene-magnetic resonance imaging (MRI) umfundi noma neuropathy imikhiqizo, kuhlanganise amawashi noma imibuthano.
Ezikhona ukuthi kukhona ukuziphatha ukuze steadfastly ukuhambisana isitokwe materials ukuthi kukhona yezokwelapha.
Ukweluleka ithimba kwezempilo noma yabafundi-magnetic resonance imaging (MRI) izinqubo noma inqubo imishini.
Umsebenzi izindlela optical ukuba baphinde uzibuthe onamandla resonance imaging (MRI) izithombe, isibonelo esiwusizo ubuchopho-imaging, real-time umzimba motion-kokulandela, noma okuqanjiwe zemisipha kanye indiza ngeso.
Demand sedatives noma izidakamizwa ezengeziwe ezivela odokotela kubantu abane ninetwetwe noma claustrophobia.
Cabanga amarekhodi amafushane ukuthi kukhona yezokwelapha ezigulini.
Hlola uzibuthe resonance imaging (MRI) amathuluzi ukuqiniseka yokusebenza efanele nekghono ngokuhambisana nezidingo.
Yakha izaziso ukufinyeza ahlola izinqubo noma emiphumeleni mayelana odokotela noma ochwepheshe ezahlukene zokwelapha noma imibiko.
Xhumanisa kunomthelela yemvelo yemvelo ukuthenga isibambo (PAC) imikhiqizo.
Ubujamo evikelwe kancane, moveable-magnetic resonance imaging (MRI) abafundi somzimba ukuba babe imaged, ezifana ingalo, edolweni, noma uye.
imihlangano Uhlelo ezindabeni noma amaklayenti uphenyo ukuthi kukhona emitholampilo.
Umsebenti Izenzo Udinga
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Ukuqonda sakhiwa izigaba nemisho amaphepha ezihlobene nomsebenzi.
Ukulalela-Ukuze Active yini abanye abantu bathi ukuhlinzeka ukunakekelwa lonke, ukuthatha isikhathi ukuqaphela izici kokuba ekhiqizwa, obuza imibuzo njengoba enhle, hhayi likhinyabeze at izikhathi ezingafanele.
Ukushicilela-Ukukhulumisana kahle ngokubhala hhayi njengokungabafanele nezidingo emakethe.
Ukuxoxa-Ukukhuluma nabanye ukubalula Imininingwane ngempumelelo.
Izibalo-Ukusebenzisa izibalo ukulungisa izinkinga.
amasu Isayensi-Lisebenzisa neziqondiso zobuchwepheshe ukulungisa izinkinga.
Criticalthinking-Isebenzisa ubuhlakani futhi wacabanga ukuzibona izinzuzo nokushiyeka komngane ongakhetha enye, Imiphumela noma izindlela yezinkinga.
Active Learning-Ukuqonda ukubaluleka kolwazi olusha kokubili esizayo nezamanje okuxazulula izinkinga ekuthathweni futhi.
Ukufunda Strategies-ukukha nokusebenzisa amasu educationORtutorial nezinqubo buyafaneleka inkinga ukufundisa noma lapho sitadisha izinto ezintsha.
Monitoring-OverseeingPERDiscovering ukusebenza ejensi, abantu abengeziwe, noma ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo cabanga zokulungisa noma ukudala izithuthukisi.
Komphakathi Perceptiveness-Ukuqaphela othersA izimpendulo nokwazi ukuthi kungani beziphatha ngoba benza.
Ukuthonya-ukuncenga abanye ukushintsha imikhuba noma nongqondongqondo zabo.
Ingxoxo-Ukuthatha abanye ndawonye nokuzama buyisana okwahlukile.
Sibayala-ibayala abanye howto ukuthatha isinyathelo.
Inkampani Orientation-Ngobuqotho uzama ukuthola amasu ukusiza abantu.
Inxanxathela okuxazulula izinkinga Ukuthola nobunzima eziyinkimbinkimbi nokubuyekeza imininingwane lefanele nokuqalisa ongakhetha futhi ukukhiqiza kanye nokulinganisa okukhethiwe.
Amabhizinisi Ucwaningo-Ukutadisha izidingo kanye izidingo zomkhiqizo ukudala isitayela.
Engineering Design-Ukuba amadivayisi noma kwenta ubuye ugcogce ubuchwepheshe ukusiza umsebenzisi idinga.
Amathuluzi amathuluzi Ukukhethwa-Inquma futhi uhlobo imishini kwakudingeka bakhiphe umsebenzi.
izicelo Isitolimende-Ifaka, imishini, izintambo, noma imishini ukwanelisa izidingo.
izinhlelo Programming-Ukubhala computer izinhlelo zokusebenza ezahlukene.
Umsebenzi izingcingo Tracking-Ukuqaphela, Izikali, noma izinkomba ezahlukene qiniseka i imishini lisebenza ngempumelelo.
Opharetjhini izinqubo Control-Ukusingatha izindlela noma amadivayisi.
Isondlo-Kwenziwa ukunakekela amathuluzi kokunquma uma.
Ukuxazulula-Inquma zezici ezibangela amaphutha eziya ezisebenza kanye kokunquma ukuthi yini ngakho.
Elungisa-Balungisa amadivayisi noma onobuhle usebenzisa imishini ukuthi oyifunayo.
Quality-Control Ukuhlolwa-Ukwenza ukuhlolwa ukuhlolwa izinto, izixazululo, noma imisebenzi ukuhlola izinga noma ukusebenza.
Buka futhi izinzuzo Decisionmaking-Uma ucabangela futhi izindleko engaqhathaniswa imisebenzi kungenzeka ukukhetha omunye ofanele kakhulu.
Izinguquko Ukuhlaziya-Icacisa indlela uhlelo kufanele zisebenze futhi kanjani esimweni, imisebenzi, kanye nezinkinga kungaba nomthelela emiphumeleni.
Izindlela Ukuhlaziya-Inquma izinqubo noma izimpawu ukusebenza uhlelo futhi ngokuhambisana izifiso kohlelo, ezifanele noma izenzo kwakudingeka aqinise ukusebenza.
Timemanagement-Ukulawula okwamanje yabanye futhi komuntu isikhathi siqu.
Ukuphatha Imali Ukuthola kanjani imali kungenzeka kusetshenziswe ukuba umsebenzi owenziwa, futhi yokuthengisa mayelana nala izindleko.
Ukuphathwa Product Resources-Ukuqaphela futhi lithenga ukusetshenziswa ngokufanele izici, imishini, futhi izinto ezidingekayo ukwenza esithile usebenze.
Ukuphathwa Abasebenzi Resources-Ukudala, baphokophelele, futhi ehola abantu ngoba usebenza, ekuboneni abantu okungcono kakhulu umsebenzi wakho.
Nxusa sika Stage (noma ezengeziwe 2-yr idiploma)
Izifundo eziningana School
Ngaphezu kwe 1 yr, kuya ku 2 iminyaka futhi kubandakanya,
Umsebenzi Authority Amakhono Ukufaneleka
Impumelelo / Umsebenzi – %
Ukuphathwa – %
Usizo – %
Inkinga Abanye – %
Umumo Komphakathi – %
ukucindezeleka Tolerance – %
Ukubhekisisa Ukujula – %
Ukwethembeka – %
Ukuqamba – %
Direct futhi ayikwazanga iqhaza ekulungisweni, amakhambi, futhi uzilungiselele Muffin izinhlanzi, inyama, imifino, …